कृत्रिम बुद्धिमत्ताले कसरी व्यवसायहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ Martech Zone
बुधबार, मार्च 27, 2019 बुधबार, मार्च 27, 2019 अंकित पटेल
कृत्रिम बुद्धिमत्ता यसको क्षमताहरु संग सफ्टवेयर उद्योगमा चम्किरहेको छ। कम्पनीहरू कृत्रिम बुद्धिमत्तामा क्यापिटल गर्दैछन् किनकि यो मापन र विकासको क्रममा छ। विगत केहि वर्षहरु मा, हामी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बारे मा धेरै सफलता कथाहरू सुनेका छौं। दायाँ अमेजन अपरेशनल दक्षता देखि GE आफ्नो उपकरणहरू चलिरहेको, कृत्रिम बुद्धिमत्ता excelling गरिएको छ।
आजको संसारमा ठूला निगमहरू मात्र होइन साना-ठूला उद्योगहरू पनि संख्यामा देखा पर्दै छन्। कृत्रिम बुद्धिमत्तासँग विभिन्न उपकरणहरू छन् जसले साना र मध्यम आकारका उद्योगहरूलाई उनीहरूको उत्पादकत्व र दक्षता सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
W तरीका कृत्रिम बुद्धिमत्ताले तपाईंको व्यवसायलाई मद्दत गर्न सक्दछ
आवाज खोजी सहायकबाट मद्दत गर्नुहोस् - आवाज खोजी सहायकले तपाईलाई कुनै पनि समय र कहिँ पनि मद्दत गर्न सक्छ। सब भन्दा प्रसिद्ध आवाज खोजी सहायक सिरी हो जुन आईओएस कम्प्युटर र उपकरणहरूमा आउँदछ। त्यहाँ अन्य भ्वाइस-खोजी सहायकहरू पनि छन् जस्तै गुगलका सहायक र बिक्सबी, जुन सामसु Samsung उपकरणहरूमा नयाँ आउँदैछ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर, आवाज खोजी सहायकहरूले उनीहरूलाई आवश्यक जानकारी प्रदान गर्न मद्दत गर्न सक्छन्। एआई पनि एक उपकरण को रूप मा उपयोग गर्न को लागी एक मानव बाट लोड लिन मद्दत गर्न सकिन्छ। लोकप्रिय समाधानहरू हुन् गुगल, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, र डायलगफ्लो.
बजार फिट निर्धारण - गर्न उपभोक्ता विभाजन बुझ्नुहोस्, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्पाद-बजार फिट निर्धारण गर्न एक उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो एक उपभोक्ताको विभाजन बुझ्न मेशिन शिक्षाको शक्ति ट्याप गरेर गर्न सकिन्छ। कुनै पनि व्यवसाय संगठन विश्लेषण गर्न को लागी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग गर्न सक्दछ र मार्केट एनालिटिक्स अझ छिटो जम्मा गर्न। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर, संगठनहरू दुबै परम्परागत र अनलाइन लक्षित विज्ञापनमा चम्किन सक्छन्। कृत्रिम बुद्धिमत्ताले ग्राहकहरूलाई उनीहरूको आधारलाई लक्षित गर्न कुनै व्यवसायको अन्तर्दृष्टि दिन्छ। एक प्रदायक जुन एआई प्रयोग गरी ग्राहक विभाजनमा फोकस गर्दछ लेक्सर.
कर्मचारी विकास संलग्नता को उत्पादन - सबै व्यवसायहरूमा एचआर व्यक्तिको भाँडा लिन सक्ने क्षमता हुँदैन। त्यस्ता व्यवसायहरूले कृत्रिम बुद्धि प्रयोग गर्न सक्छन् कर्मचारीको संलग्नता र विकासको आवश्यकता अनुगमन गर्न। कृत्रिम बुद्धिमत्ताले पनि एक कर्मचारीको प्रदर्शनको फीडब्याक भेला गर्दछ। प्रत्येक कर्मचारीको चिन्ता र उसको फीडब्याक्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण प्रयोग गरेर साझा गर्न सकिन्छ। यो स्टार्ट-अप संस्थापकको र व्यवसाय मालिकको काम हो, कार्यस्थलमा सकारात्मक भाइबस इंजेक्सन गर्नु जुन उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न सकिन्छ कि उनीहरूको टोलीका सदस्यहरूले फीडब्याक र सरोकारहरू बुझ्दछन्। एउटा उदाहरण हो AmplifAI समाधानहरू.
ग्राहक सेवा सुधार गर्दै - ग्राहक समर्थन र एक व्यापार संगठन को ग्राहक सेवाहरु लाई सुधार गर्न, कृत्रिम बुद्धिमत्ताले कामदारहरुलाई सहयोग गर्न मद्दत गर्न सक्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्राहकहरूको यात्रा टिकट क्रमबद्ध गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, तिनीहरूको प्रश्नको उत्तर अनलाइन आदि। यी कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणले साना आकारको व्यवसायलाई मद्दत गर्न सक्छ अधिक कुशल ढ services्गले सेवाहरू पुर्‍याउन। एआई उपकरणको उपयोगको साथ, त्यहाँ ग्राहकको सन्तुष्टि र संलग्नतामा वृद्धि हुनेछ।
एक तयार समाधानको उपयोग - कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण धेरै समर्पण को साथ कार्यालय खाली ठाउँ मा धेरै समस्याहरु र दैनिक कार्यहरु स्वचालित र सुव्यवस्थित गर्न सक्छन्। एआई उपकरण ब्यवसायिक रिपोर्टहरू प्रदान गर्न संचार ब्यबहार जस्ता विभिन्न कार्यहरू गर्दछ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफर्मले ग्राहकहरुलाई ब्यावसायिक पट्टा रिक्त स्थानमा नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ। बिक्री बल आईन्स्टाइन, IBM वाटसन स्टुडियो, गुगल क्लाउड एआई, Azure मेशिन लर्निंग स्टुडियो, र AWS मेशिन शिक्षा उपकरण उद्योग को नेतृत्व।
माथिका सबै कृत्रिम खुफिया उपकरणहरूले व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम गर्दछ। एआई प्रयोग गरीरहेको सब भन्दा प्रदर्शन कार्य भनेको दैनिक सञ्चारको व्यवस्थापन, डाटा एनालिटिक्स जम्मा गर्ने, बैठक तालिका मिलाउने र अन्य बढि चीजहरू हुन्। कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सहायताले, साना र मध्यम आकारका व्यवसायहरूले सफ्टवेयर मार्केटमा उनीहरूको दक्षता र प्रतिक्रियाशीलता सुधार गरिरहेका छन् ... धेरै ठूला संगठनहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन्।
त्यहाँ बिभिन्न तरिकाहरू छन् जुन तपाईं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसको प्रयोग गरेर आफ्नो व्यापारको स्तर सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, समावेश सहित:
मार्केटिंग गरेर तपाईंको बिक्री बढाउनुहोस्: कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित उपकरणहरूले दिनको बजारमा अनुकूलन, उपभोक्ता-बिक्री जानकारी, समस्या समाधान गर्ने आदिमा तपाईंको व्यवसायलाई मद्दत गर्न सक्छ। एआई अनुप्रयोगहरू ग्राहकले गरेका अनुरोधहरू गहिरो गरीन्छ ताकि राम्रो र सटिक समाधानहरू वितरण गर्न। एआई थप ग्राहकहरु लाई सुझाव गर्न मा प्रयोग गर्न सकिन्छ थप वस्तुहरु संग, ती उत्पादनहरु को उपयोग गरेर को प्रयोग गरीरहेको छ। तपाईं आफ्नो मूल्य अनुकूलित गर्न र तपाईंको प्रतिस्पर्धा बुझ्न सक्ने तरिकाहरूको लागि खोजी गर्न सक्नुहुन्छ। एआई अनुप्रयोगहरू तपाइँको ग्राहकहरूको प्राथमिकतामा मद्दत गर्दछ र राम्रो आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि काम गर्दछ।
आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन सरलीकृत गर्नुहोस्:एआई अनुप्रयोगहरूले व्यवसायलाई उनीहरूको ईन्भेन्टरी राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ। यो आपूर्ति चेन लाई अप्टिमाइज गर्न र रिफिलहरु स्वचालित गर्न उत्तम तरिका हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगहरूले तपाइँलाई तपाइँको अर्डर व्यवस्थापनलाई स्वचालित बनाउन र तपाइँको ब्यावसायिक प्रक्रियाहरू पूरा गर्न मद्दत गर्दछ।
अनुप्रयोग सुरक्षा र मर्मत सुधार गर्दै:एआईले तपाईको व्यवसायलाई यसको मर्मत अनुसूची सुधार गर्न मद्दत गर्दछ मुख्यतया यातायात र निर्माण क्षेत्रहरुमा। उदाहरण को लागी, एयरलाइन उद्योग को उपयोग गर्दछ कृत्रिम बुद्धि प्रविधि मर्मत जाँचको संचालनका लागि। एयरलाइन उद्योगमा मेकानिकल भागहरूको लगाउने र च्याहिको एआई अनुप्रयोग प्रयोग गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। यी अनुप्रयोगहरूले तपाईंलाई उत्तम अप्टिमाइजेसनको लागि मर्मतसम् तालिका बनाउन मद्दत गर्दछ। यो अन्ततः चाहिएको ढिलाइबाट बचाउँछ जानकारी वितरण र विश्लेषण हो।
साइबर अपराधको रोकथाम:व्यापारिक संगठनहरूले ठगी लेनदेनहरू ट्रेस गर्न धेरै समय बर्बाद गर्दछन्। त्यहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्तामा ढाँचाहरू रहेकाले, उपकरणहरू साइबरसुरक्षा धम्की पत्ता लगाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। एआई उपकरणहरू प्रयोग गरेर, त्यहाँ झूटा अलार्मको संख्यामा कमी हुन सक्दछ जुन हामी प्राप्त गर्छौं किनकि तिनीहरू नियममा आधारित अनुप्रयोगहरू छैनन्।
आत्म-संचालित प्रविधिहरू प्रयोग गर्दै:त्यहाँ धेरै व्यवसायहरू छन् जुन बल्कमा उत्पादनहरू ढुवानी गर्नु पर्छ। त्यस्ता व्यवसायहरू कृत्रिम खुफिया प्रणालीमा निर्भर हुन्छन्। एआई प्रणाली यातायात को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ किनकि ती लागत कम गर्न र मानव द्वारा संचालित सवारी भन्दा बढी विश्वसनीय साबित हुनेछ। यातायात शुल्कहरू पनि कृत्रिम खुफिया प्रणाली प्रयोग गरेर बचत गर्न सकिन्छ।
सबै भन्दा राम्रो उम्मेदवारहरू भाडामा लिनुहोस्: सबै भन्दा राम्रो उम्मेदवारहरू फेला पार्नुहोस् र तिनीहरूलाई तपाईंको व्यवसायको लागि भाडामा लिनुहोस्, कार्य लिने धेरै समय हो। यो कारण हो कि कृत्रिम बुद्धिमताले मान्यता सामना गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। एआई अनुप्रयोगहरू प्रयोग गरेर, भर्तीकर्ताहरूले भावनात्मक संकेतहरूको सेटमा आधारित अन्तर्वार्ताहरू लिन सक्छन् जुन पहिले निर्धारित गरिएको थियो। त्यसो गर्दा, यसले तपाईंको व्यवसायलाई यसको भर्ती प्रक्रिया सुचारु गर्न मद्दत गर्दछ।
राम्रो व्यापार निर्णय लिने:कुनै डाटा बेकार छ यदि यसलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरिएको छैन। इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि तपाईले डाटाबाट सिक्नु पर्छ जुन उपलब्ध छ। तपाइँ पूर्ण रूपमा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुप्रयोगहरूमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको कामलाई सजिलो बनाउनको लागि। एआईले ढाँचा पत्ता लगाउन सक्छ र यी ढाँचाहरूलाई तपाइँको व्यवसायको नेटवर्क र भण्डारण टेक्नोलोजी सुधार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
त्यसो भए कृत्रिम बुद्धिमता अनुप्रयोग र उपकरणहरू प्रयोग गरेर तपाईंको व्यापारको स्तर सुधार गर्ने यी तरिकाहरू छन्। त्यसो गरेर, तपाईंको व्यवसाय राम्रो लाभको लागि अनुकूलित हुनेछ र बजारमा राम्रो स्थान प्राप्त गर्नेछ।
अंकित पटेल मार्केटिंग / प्रोजेक्ट म्यानेजर हुन् XongoLab टेक्नोलोजीहरू र पेप्पीओसन, जसले विश्वव्यापी रूपमा शीर्ष-निशान वेब र मोबाइल अनुप्रयोग विकास समाधानहरू प्रस्ताव गर्दैछ। एक शौकको रूपमा, उनले नयाँ र आगामी प्रविधि, मोबाइल विकास, वेब विकास, प्रोग्रामिंग उपकरणहरू, र व्यापार र वेब डिजाइनको बारेमा लेख्छन्।
रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन के हो?